Laptọọpụ kacha mma na-arụ ọrụ nke 2022, nke ka mma?
Laptọọpụ dị ọnụ ala
Site na ọnụahịa
Ihe na-erughị € 500
Ihe na-erughị € 1000
Egwuregwu na-erughị € 1000
Uru kacha mma maka ego
Kedu laptọọpụ ị ga-azụ?
Ryzen 5 Laptọọpụ
Ryzen 7 Laptọọpụ
Site na iji
Iji rụọ ọrụ
Enweghị sistemụ arụmọrụ
Laptọọpụ ndị China
Akwụkwọ ndetu dị obere
Enwere ike ibu ọrụ
Anaghị m achọpụta ntụ ntụ ma ọ bụrụ na m kwuo na e nwere ọtụtụ puku ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa. A na-eme ọtụtụ n'ime ha na njem, na-ebu ma ọ bụ na-ebutu ma ọ bụ na-ebuga tapas na tebụl ndị na-eri nri, ma e nwekwara ọrụ ndị ọzọ ebe ihe anyị ga-ebuli bụ mkpịsị aka anyị. Ana m ekwu maka ọrụ ndị ahụ anyị ga-adabere na a laptọọpụ ịrụ ọrụ, na kọmpụta kacha mma ga-adabere n'ọrụ anyị ga-arụ.
Ọrụ a na-eji kọmpụta arụ ọrụ dịkwa ọtụtụ. N'ime ụfọdụ n'ime ha, anyị ga-ede naanị ederede, nke "fọrọ nke nta ka ọ bụrụ" ngwá ọrụ ọ bụla bara uru anyị, ma na ndị ọzọ anyị ga-achọ ihe ndị ọzọ dị ike karị, dị ka ndị nke anyị ga-eji na-edezi multimedia. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ihe ị chọrọ ịma ka ịhọrọ kacha mma laptọọpụ na-arụ ọrụ, nke anyị ga-etinyekwa ozi maka ụmụ akwụkwọ, nke bụ ụdị ọrụ ọzọ.
1 Laptọọpụ kacha mma iji rụọ ọrụ
1.2 Dell XPS 13
1.3 Microsoft Mkpa Pro 7
1.4 Lenovo Yoga C930
1.5 Huawei MateBook D15
2 Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma iji rụọ ọrụ
2.1 Onwe ya
2.2 Ntụkwasị obi
2.4 Nkwụsi ike
2.7 Usoro njikwa
3 Ọtụtụ mmemme nke ndị na-achọ laptọọpụ na-arụ ọrụ
3.4 Iji rụọ ọrụ na igwu egwu
3.5 Iji rụọ ọrụ na ọmụmụ ihe
3.8 Jiri igwe mebere
Laptọọpụ kacha mma iji rụọ ọrụ
Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 -…
ASUS VivoBook 14…
Lenovo IdeaPad 3 -…
MacBook Pro nke Apple bụ otu n'ime akwụkwọ ndetu ọrụ kachasị amasị ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ bụ kọmpụta nwere ihe nrụpụta i5 nke ga-emegharị sistemụ arụmọrụ macOS nke ụlọ ọrụ apụl, nke na-arụ ọrụ nke ọma 8GB Ram na diski ike SSD, 256GB na ụdị ntinye.
Ihuenyo Apple abụrụla nke kachasị mma kemgbe mmalite ya, MacBook a bụ ihuenyo Retina nke anyị ga-ahụ ihe niile nke ọma na enweghị agba agba nke ga-eme ka anyị mebie anya anyị. Ogwe aka ya bụ otu n'ime ihe kacha mma n'ahịa, a Kpọtụrụ egwu mmetụ aka ọtụtụ nke, na mgbakwunye na ime mmegharị ahụ a na-ahụkarị, anyị nwekwara ike iji mgbakwunye nrụgide malite nhọrọ pụrụ iche
Kacha isi MacBook Pro bụ ugbu a maka a ọnụahịa banyere € 1350, nke na-adịchaghị ukwuu ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ihe nile ọ pụrụ inye anyị.
Del XPS 13 bụ laptọọpụ nwere otu n'ime isi ihe kachasị ike na ìhè ya. O nwere a Ihuenyo 13.3-inch na ịdị arọ nke 1.2kg nke ahụ ga-eme ka anyị nwee ike isi n’otu akụkụ gaa n’ọzọ n’enweghị nnukwu mbọ. Ihuenyo bụ Full HD (1920 × 1080), nke ga-eme ka anyị hụ ihe niile na ezigbo mma. N'agbanyeghị ịbụ ngwaọrụ ọkụ dị otú ahụ, ọ na-enye nnwere onwe karịa anabatara nke awa 4.
Dell Teknụzụ XPS 13 ...
Sistemu eji arụ ọrụ, Windows 10, ga-ebugharị site na a i7 processor na 16GB nke RAM nke ga-eme ka anyị rụọ ọrụ dị mfe, ha agaghị adị ntakịrị ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na nhazi multimedia.
Microsoft Mkpa Pro 7
Microsoft's Surface Pro 7 bụ laptọọpụ emebere ka ọ rụọ ụdị ọrụ niile, mana ikekwe ebe anyị ga-arụ ọrụ nke ọma bụ ndị anyị kwesịrị ịdị na-eke ihe. Dị ka elu niile, anyị na-eche ihu a ngwakọ touchscreen nke anyị nwere ike iji dị ka mbadamba nkume yana dịka kọmpụta nwere sistemụ arụmọrụ desktọpụ, Windows 10 na nke a.
Microsoft Mkpa Pro 7 -...
N'ime, laptọọpụ mbadamba a nwere a i5 processor, 8GB Ram na draịvụ ike SSD, ụdị ntinye 128GB, nke na-emesi anyị obi ike na ihe niile anyị na-eme anyị ga-eme ya nke ọma. Dị ka mbadamba nkume, ọ nwere ezigbo ihuenyo 12.3-inch (2736 × 1824) yana sensọ na akụkụ dị iche iche, dị ka igwefoto (8MP nke bụ isi na 5MP nke maka selfies).
N'iburu n'uche na ọ bụ ngwaọrụ Microsoft gọọmentị, ọnụahịa ya bụ ihe ijuanya: ugbu a, ọ dị maka ya ihe dị ka € 750.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka laptọọpụ rụọ ọrụ na ihe anyị chọrọ mma kacha mma na ihe oyiyi, ihe anyị nwere mmasị bụ ihe dị ka Lenovo Yoga C930. Ya Ihuenyo bụ 4K, ihe ha kwakọbara n'ime panel dị n'okpuru 14 inch (13.9 ″ kpọmkwem). Ma, na mgbakwunye na, ịkwaga mkpebi nke ihuenyo na mfe ha gụnyekwara nnọọ elu esịtidem components.
Lenovo Yoga C930 -…
Ihe nhazi nke etinyere na Yoga a bụ Intel i7, nke na-eme ka o doo anya na, yana 512GB SSD draịvụ ike, ihe niile ga-emeghe na nku anya. Na mgbakwunye, ihe niile anyị meghere ga-agba ọsọ n'enweghị nsogbu, n'ihi 16GB nke RAM nke etinyere na kọmpụta a.
Ọnụ ego anyị nwere ike nweta Lenovo Yoga adịghị ala, mana ọ bụghị dị elu ka mmadụ ga-atụ anya maka ihe niile ọ na-enye anyị.
Kọmpụta dị mma iji rụọ ọrụ maka uru ọ bara maka ego bụ Huawei MateBook D15. Maka ihe dịka € 600, ihe anyị ga-enweta ma ọ bụrụ na anyị azụta kọmputa a bụ kọmputa nwere ihe nrụpụta AMD Ryzen 5, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD, 256GB na nke a. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ kọmpụta ihuenyo buru ibu ma ọ bụ ọkọlọtọ, ya bụ, 15.6 sentimita asatọ, nke ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na oghere buru ibu.
Huawei Matebook D15 -…
Otu n'ime isi ihe na-eme ka Huawei a bụrụ ihe na-adọrọ mmasị bụ na o nwere Huawei One Touch, nke bụ ihe mmetụta mkpịsị aka nke anyị nwere ike iji chekwaa ozi anyị niile site na iji usoro nchebe ọzọ na-enweghị ịchụ nkasi obi.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ kacha mma iji rụọ ọrụ
Emebere laptọọpụ na mbụ ka ha wee pụọ na igwe eletrik ruo ogologo oge. Nke a bụ otu a. Nnwere onwe ya nwere oke na uru bụ isi bụ na ọ dị mfe iji ya site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, hapụ ya obere oge wee nwee ike ijikọ ya na mgbidi na-esote. Nke a agbanweela ma na-aghọwanye ihe dị mkpa were nnwere onwe n'ime akaụntụ. Otu n'ime ihe kpatara ya, nke kachasị mfe, bụ nkasi obi.
Nnwere onwe dị mma ga-eme ka anyị chefuo maka eriri chaja ogologo oge. N'aka nke ọzọ, na nke a na-adabereworị na ọrụ ahụ, ọ ga-enye anyị ohere itinyekwu oge na-ejikọtaghị ya na ọkụ ọkụ, nke dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịkwụ ụgwọ ya ruo ọtụtụ awa. Ọ bụrụ na ọrụ anyị na-egbochi anyị ịchaji laptọọpụ anyị, anyị ga-atụle ịzụrụ laptọọpụ nwere ikike ka ukwuu. Mana ole bụ ezigbo nnwere onwe? Na mbido, ezigbo nnwere onwe bụ nke ahụ n'elu 5 elekere. Ọ bụrụ na isi okwu a dị anyị mkpa, enwere kọmpụta nwere ike inye nnwere onwe ihe ruru awa 10.
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ịnọ n'etiti ọrụ na ịkwụsị ya n'ihi na ihe adịghị mma. Nke a nwere ike ime ọtụtụ oge na kọmpụta; Ihe ọ bụla nwere ike ịgahie ụzọ, yabụ na ọ bara uru ịgbalị ịmachi ugboro ole anyị na-ahụ ụdị ọdịda ndị a. Ya mere, anyị ga-achọ otu ìgwè nke na-enye ezigbo ntụkwasị obi na nke a, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ ihe, nke, n'echiche m, na-amalite na. Sistemụ nrụọrụ.
A na-ekwu mgbe niile, na ihuenyo na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe akaebe kacha mma, na Windows bụ sistemụ arụmọrụ kacha nta a pụrụ ịdabere na ya nke atọ kachasị ewu ewu. Usoro a pụrụ ịdabere na ya, n'ịtụle na enwere ọtụtụ nkesa na-ewu ewu na Linux, bụ MacOS Apple. Nkesa Linux dị mma bụkwa nke a pụrụ ịdabere na ya, mana ị ga-ahọrọ nke nwere nnukwu ụlọ ọrụ n'azụ ya ka nke a bụrụ ikpe. Dịka ọmụmaatụ, Ubuntu. N'agbanyeghị nke ahụ, Windows adịghị enwe nsogbu dị ka ọ dị afọ ole na ole gara aga na ntụkwasị obi ya nwere ngwọta: zụta kọmputa na ọkara-aga n'ihu components, dị ka i7 processor sitere na Intel ma ọ bụ Ryzen 7 sitere na AMD, 8GB nke RAM na draịvụ ike SSD. Ya mere, anyị ga-enweta ntụkwasị obi na ihe anyị na-akọwa na isi ihe na-esote.
Arụmọrụ dị mkpa na laptọọpụ ịrụ ọrụ ga-adabere n'ọrụ anyị ga-eji ya rụọ. Dị ka anyị kọwara, akụkụ dị mkpa nke arụmọrụ metụtara processor, kamakwa na SSD. Mgbe anyị na-ekwu maka arụmọrụ, anyị nwekwara ike ikwu maka ọsọ na ka laptọọpụ na-adị ngwa ngwa anyị ga-elele ihe o nwere, opekata mpe ihe nrụpụta Intel i5 ma ọ bụ AMD Ryzen 5. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ihe dị obere, ihe anyị ga-enweta ga-abụ otu nke ga-efu nnukwu ego iji mepee ngwa ọ bụla.
N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa mkpa ịtụle draịvụ ike. Nke SSD draịva Ha na-enye elu ịgụ / ide ọsọ ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ otu nwere ụdị diski ọgbara ọhụrụ, anyị ga-eme ihe niile ngwa ngwa, nke gụnyere ịmalite sistemụ arụmọrụ. Ihe na-ekwesịghị imetụta arụmọrụ nke ukwuu bụ RAM, ma ọ bara uru ịmalite na 8GB ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ike ịme ọtụtụ usoro na-emeghe n'otu oge na-enweghị kọmputa na-ata ahụhụ nke ukwuu.
Nkwụsi ike na ntụkwasị obi na-aga aka. Enyere anyị ntụkwasị obi site n'eziokwu na ngwanrọ anaghị akwụsị ịrụ ọrụ. Nkwụsi ike pụtakwara na ihe ọ bụla ị na-eme, ị na-eme ya nke ọma. Ya mere, iji nweta nkwụsi ike anyị ga-achọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ anyị na-achọ mgbe anyị na-achọ ntụkwasị obi, n'ime nke anyị nwere a ezigbo sistemụ arụmọrụ na components dị ka ezigbo processor, ezigbo RAM na ezigbo draịvụ ike, dị ka SSD. Anyị nwekwara ike izere ịzụrụ diski adịghị mma nke nwere ike ime ka ihe niile na-ata ahụhụ.
Ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ nkwụsi ike, ọ dịkwa oke mkpa ejikwala ngwanrọ na ụdị ọhụrụ ya, ọbụna karịa ma ọ bụrụ na nsụgharị ndị a dị na beta. Ezi ihe atụ bụ ihe LibreOffice na-eme: ha na-ewepụtakarị ụdị akwadoro maka ndị otu mmepụta yana nke ọzọ nwere ozi niile. Nke mbụ nwere atụmatụ ole na ole, mana ewepụtaralarị ihe ndozi ọzọ yana ọ kwụsiri ike yana ntụkwasị obi. Ụdị kachasị ọhụrụ nwere atụmatụ kachasị ọhụrụ, mana ọ nwekwara okwu ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nkwụsi ike, anyị ga-ahọrọ nhọrọ nke mbụ, nke a bụkwa eziokwu maka ngwanrọ niile. Ihe atụ ọzọ ga-abụ, na sistemụ dabere na Linux, ịhọrọ mwepụta ndị akwadoro kemgbe ọtụtụ afọ, nke a maara dị ka LTS.
Kọmputa na-arụ ọrụ kwesịrị ịbụ kọmpụta agha nke anyị na-agaghị egbu oge na ya. Oge bu ego, yabụ na ọ baghị uru ịzụta ihe ma ọ bụrụ na anyị ga-etinye oge dị ukwuu n'ịrụzi ya, nke a bụkwa eziokwu maka ngwaike na ngwanrọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ izere inwe usoro mgbe niile ma ọ bụ tinyegharịa sistemụ arụmọrụ, ezigbo nhọrọ bụ ịhọrọ kọmputa na-eji Windows 10, nke, dịka Microsoft si kwuo, ga-abụ ụdị sistemụ arụmọrụ ya kachasị ọhụrụ. Ma mba, nke a apụtaghị na ha agaghị ahapụ ozi ọma, ma na ndị a ga-ahapụ ka mmelite na nke a ga-abụ ikpe ruo mgbe ebighị ebi. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịgbalite defragmentation diski akpaka na ndabara yana, ọ bụrụ na anyị wụnye ngwanrọ sitere na Ụlọ Ahịa Microsoft, ndekọ ahụ ga-anọgide na-adị ọcha.
Mgbe anyị chọrọ ịzụta laptọọpụ iji rụọ ọrụ, anyị na-enwekwa mmasị iche echiche ole ka anyi ga ebughari ya. Ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ n'ụlọ, ikekwe anyị na-enwekarị oge n'etiti tebụl na sofa. Ma ọ bụrụ na anyị na-aga na-arụ ọrụ n'èzí ụlọ, na oge ọ bụla ma ọ bụ awa na a ebe, ọ bara uru ịzụrụ ihe Mkpa ọkụ. N'ime kọmpụta nwere nnukwu na obere, mana ọ dịkwa arọ na ọkụ.
Ọ bụrụ na ọrụ anyị ga-amanye anyị iburu laptọọpụ anyị site n'otu ebe gaa n'ọzọ kwa mgbe, ikekwe anyị enweghị mmasị na laptọọpụ 15.6-inch; o yikarịrị ka anyị ga-ahọrọ a kọmputa nwere ihuenyo inch 13 na mgbakwunye, ọ dị ntakịrị karịa 1kg. Nke a ga-eme ka ọ hụ na ọ ga-enwe ezigbo mmegharị, ma anyị ga-ahụ obere ọdịnaya na ihuenyo. E nwekwara kọmputa ndị ọzọ nwere ihuenyo buru ibu nke dị ihe dị ka 1.5kg, mana ha bụ ihe a maara dị ka Ultrabook na ọnụ ahịa ha dị elu karịa. Ọ bụrụ na anyị chọrọ obere ibu, ihuenyo dịtụ ibu na ezigbo nnwere onwe, ihe na-amasị anyị bụ otu n'ime Ultrabooks ndị ahụ.
Sistemu arụ ọrụ na laptọọpụ iji rụọ ọrụ na-adabere n'ọtụtụ ihe. Nke mbụ bụ kedu software anyị chọrọ. Imirikiti ngwanrọ dị maka Windows, yabụ n'ozuzu ya, Windows bụ sistemụ arụmọrụ kacha mma iji rụọ ọrụ. N'ezie, ọ bụ nke kasị nwayọọ, echere m na ọ bụ eziokwu. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ kọmputa macOS n'ihi na ọ na-enye nnukwu ndakọrịta na ngwa ndị ama ama na nkwụsi ike, ọsọ na ntụkwasị obi. Ihe ọjọọ bụ na e nwere ngwa ọdịnala na-agaghị abụ maka Apple sistemụ.
Enwerekwa nhọrọ nke Linux. Ọ bụ obere dakọtara karịa macOS na enwere ngwa ama ama dị ole na ole karịa na Windows mana, ọ bụrụ na anyị ahọrọ nkesa dị mma, nkwụsi ike ya, ntụkwasị obi, ọsọ na nchekwa enweghị atụ. N'ime sistemụ ndị dabeere na Linux anyị nwekwara gam akporo, karịchaa ya gam akporo-x86 ndụdụ, na Chrome OS, mana ha bụ sistemụ arụmọrụ abụọ nke m n'onwe m agaghị akwado maka laptọọpụ iji rụọ ọrụ.
Windows: kacha ndakọrịta.
MacOS: itule, mana a ga-enwe mmemme anyị agaghị enwe ike ịme.
Linux: ahụmịhe onye ọrụ kacha mma ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iji ngwanrọ mepere emepe rụọ ọrụ.
Ọtụtụ mmemme nke ndị na-achọ laptọọpụ na-arụ ọrụ
Ọ bụrụ na anyị na-achọ laptọọpụ ka ọ rụọ ọrụ na Autocad, anyị chọrọ ka ọ nwee ihuenyo nwere ezigbo nha, nke pụtara na ọ ga-enwerịrị opekempe 15 sentimita asatọ na mkpebi 1360 × 768 (1920 × 1080 kwadoro). Ọzọkwa, ọ bara uru nwere eserese raara onwe ya nye, ọ bụlarị ngwa ngwa na-achọ ike dị ukwuu. Maka RAM, ọ nwere ike iji 4GB rụọ ọrụ, mana 8GB na-atụ aro. Ọ ga-adị mkpa iji Windows 7 ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ka elu.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ laptọọpụ iji Photoshop na-arụ ọrụ, na tiori anyị adịghị mkpa a dị ike nke ukwuu laptọọpụ, ma a 2GHz processor ma ọ bụ ngwa ngwa na 2GB nke RAM, ọ bụ ezie na 8GB nke RAM ka akwadoro ma ọ bụrụ na anyị ga-emepụta ihe okike dị arọ. N'ihe gbasara ihuenyo, na ọ bụ ezie na ọ bụghị iwu, laptọọpụ nwere ihuenyo 15-inch kwesịrị ya, n'ihi na anyị ga-ahụkwu ọdịnaya, na kaadị eserese nke NVIDIA GeForce GTX 1660 ma ọ bụ Quadro T1000. Ọ ga-adị mkpa iji Windows 7 ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ka elu.
Ọ bụrụ na anyị ga-eji laptọọpụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụdị ngwa Office, akụrụngwa agaghị adị ike nke ukwuu. Maka Microsoft Office, otu processor zuru ezu 1GHz, 2GB RAM na ntakịrị ihe. Ma ọ bụ Microsoft kwuru. N'iburu n'uche na anyị nwekwara ịkwaga sistemụ arụmọrụ, m ga-akwado ma ọ dịkarịa ala okpukpu abụọ nkọwa ndị ahụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji Microsoft Office na-anọghị n'ịntanetị, ọ ga-abụ iwu nke iji Windows 7 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ macOS 10.8 ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, LibreOffice na nhọrọ ndị ọzọ dịkwa maka Linux.
Iji rụọ ọrụ na igwu egwu
N'etiti ịrụ ọrụ na igwu egwu, ọrụ na-achọsi ike bụ nke metụtara egwuregwu vidiyo. Ọ dịghị laptọọpụ egwuregwu kwesịrị iji processor dị ala karịa Intel i7 / AMD Ryzen 7, 8GB Ram na nnukwu draịvụ ike SSD nchekwa iji chekwaa otutu utu aha dị arọ. Na mgbakwunye, ọ ga-adịkwa mkpa na ị nwere ezigbo kaadị eserese, dị ka otu n'ime NVIDIA ama ama.
Iji rụọ ọrụ na ọmụmụ ihe
N'etiti ịrụ ọrụ na ọmụmụ ihe, ọrụ kachasị agwụ agwụ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmụ ihe, ọtụtụ ihe anyị ga-eme bụ iri ederede, nke nwere ike ịgụnye iji ihe nchọgharị ịntanetị na-achọ ha. N'aka nke ọzọ, ịrụ ọrụ nwere ike ịchọ ka anyị mepụta ederede, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe ngosi yana ịrụ ụfọdụ ọrụ nhazi vidiyo na ọdịyo. Ya mere na dabere na ọrụ anyị, processor na anyị ga-achọ ga-dịkarịa ala Intel i5 / AMD Ryzen 5 na 4 GB nke RAM. Ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu ya na nchekwa, ihe nwere 8GB nke RAM ma tinyekwa draịvụ ike SSD na ngwugwu kwesịrị ya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na ụdị Solidworks kachasị ọhụrụ, laptọọpụ anyị ga-enwerịrị ihe nrụpụta 3.3GHz ma ọ bụ karịa, 16GB kacha nta, kaadị eserese raara onwe ya nye ma jiri Windows 7 ma ọ bụ sistemụ arụ ọrụ emechaa. N'ihe gbasara ihuenyo ya, ọ bara uru na ọ bụ 15.6 inch na ọ nwere mkpebi HD zuru ezu (1920 × 1080).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka laptọọpụ rụọ ọrụ na Lightroom, anyị adịghị mkpa a elu-arụmọrụ kọmputaMana nnukwu ihuenyo 15.6-inch kwesịrị ya. Maka RAM, ị nwere ike iji 4GB rụọ ọrụ, mana 12GB na-atụ aro. Iji meziwanye arụmọrụ, a na-atụ aro ka ị nweta kaadị eserese raara onwe ya nye yana onye nrụpụta ihe dị elu, dị ka ihe nrụpụta Intel i5 / AMD Ryzen 5 ma ọ bụ ụmụnne ya "7" tọrọ ya.
Jiri igwe mebere
Iji jiri igwe mebere, a na-atụ aro ka iji kọmpụta nwere ihe nrụpụta Intel i7 ma ọ bụ ihe dakọtara na. 8GB Ram. Nke a bụ iji nwee ike ịgba ọsọ ma sistemụ arụmọrụ ndị ọbịa na ndị ọbịa, mana anyị ka kwesịrị ịtụle ihe ndị dị ike karị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka sistemụ arụmọrụ abụọ na-arụ ọrụ n'otu oge na arụmọrụ dị mma.
Na-achọ laptọọpụ dị ọnụ ala? Gwa anyị ego ole ịchọrọ imefu
ma anyị na-egosi gị nhọrọ kacha mma
* Bugharịa ihe mmịfe ahụ ka ọ gbanwee ọnụ ahịa ya
Laptọọpụ ndị ọzọ dị ọnụ ala nwere ike ịmasị gị:
Laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ
Laptọọpụ maka eserese eserese
Enwere ike ibugharị maka ndezi vidiyo
Enwere ike ibugharị maka ụmụaka
Enwere ike ibugharị maka mmemme
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Enwere ike ibu ọrụ
Ọrụ maka data: AB Internet
I nwere mmasị
Ụdị laptọọpụ kacha mma
Ọnụahịa kacha mma laptọọpụ
Mbelata ọnụ ahịa
Black Friday laptọọpụ
Laptọọpụ egwuregwu Black Friday
Laptọọpụ Cyber ​​​​Monday
Laptọọpụ dị ọnụ ala 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki - Contacto